वर्लमा सबैभन्दा ठूलो कुरा |
वर्लमा सबैभन्दा ठूलो कुरा
हेन्री ड्रममण्ड (1851 — 1897)
स्कटिश वैज्ञानिक अध्ययनकर्ता हेनरी ड्रममन्डले 1883 मा मध्य अफ्रिकाको एक मिशन स्टेशनमा पहिलो पटक आफ्नो प्रख्यात प्रेरणादायक व्याख्यान "दि ग्रेट थिएस्ट इन द वर्ल्ड" मा दिए। रेभ। ड्वाइट एल। मुडीले अर्को वर्ष ड्रमन्डको भाषण सुने र भने "उनले यस्तो सुन्दर कुनै पनि कुरा सुनेनन।" बाइबलको “प्रेम अध्याय,” 1 कोरिन्थी 13 मा आधारित, यो व्याख्यान क्लासिक भएको छ।
ड्रममंडले एडिनबर्ग विश्वविद्यालयमा मन्त्रालयको लागि अध्ययन गरे तर ग्लासको फ्री चर्च कलेजमा प्राकृतिक विज्ञानको प्राध्यापक हुन स्नातक गरे । उहाँको पुस्तक नेचुरल लॉ इन स्पिरिचुअल वर्ल्डले समयावधिका धेरै उपन्यासहरू भन्दा बढी लोकप्रियता पायो। उनी इल्याण्ड, अमेरिका र अष्ट्रेलिया दुबै वैज्ञानिक र प्रचारप्रसार अभियानमा गए।
यी चयनहरूले यस खण्डलाई "विश्वको महानतम थोक" बाट समावेश गरेको थियो र ड्रममंडका अन्य व्याख्यानहरूले प्रेमको सन्देशको आध्यात्मिक अतुलनीयतालाई चित्रण गर्दछन्।
“यद्यपि म मानिसहरू र स्वर्गदूतहरूका विभिन्न भाषाहरूमा बोल्दछु, तर म तीसंग प्रेम नै गर्दिनँ, तर म त काँसाको आवाज झैं वा झ्याली झ्याली झैं गर्दैछु । तर मसँग अगमवाणीको वरदान छ, र म सबै रहस्यहरू र सबै ज्ञान बुझ्छु। यद्यपि ममा पूरा विश्वास छ, म पर्वतहरू हटाउन सक्छु, तर प्रेम नै छैन, म केही होइन।
“प्रेम लामो समयसम्म सहन्छ, र दयालु हुन्छ; प्रेम ईर्ष्या नगर। प्रेम आफैमा भरपर्दैन, घमन्डले फुल्दैन। ऊ आफैंले अनियन्त्रित व्यवहार गर्दैन, आफ्नै खोजी गर्दैन, सजिलै रिस उठ्दैन , नराम्रो काम हुँदैन। अधर्ममा खुशी हुँदैन, तर सत्यमा रमाउँछ। सबै चीज सहन गर्छ, सबै कुरा विश्वास गर्छ, सबै कुराको आशा गर्छ, सबै चीज सहन गर्छ।
“प्रेम कहिल्यै टल्दैन; तर त्यहाँ कि हुन भविष्यवाणीहरू तिनीहरू असफल हुनेछन् अन्य भाषाहरू छन् भने, तिनीहरू हल बन्द; यदि त्यहाँ ज्ञान छ भने, यो हराउँछ। हामी जान्दछौ कि हामी आंशिक रुपमा जान्छौं, अनि हामी केही अंशमा अगमवाणी गर्छौं। तर जब पूर्णता आउँदछ, तब केही अंश जो समाप्त हुन्छ। जब म एक बच्चा थिएँ, म बच्चाको रूपमा बोल्थें, मलाई एक चि जस्तो लाग्थ्यो, मैले बच्चाको रूपमा सोचें; तर जब म एक मानिस बन्छु, म बाल्यकालिक चीजहरू छोडछु। अहिलेको लागि हामी अन्धकारमा गिलासबाट देख्छौं; तर त्यसपछि आमने सामने; अब म भाग मा थाहा छ; तर त्यस बेला मलाई थाहा हुनेछ कि म जान्दछु। विश्वास, आशा, प्रेम, यी तीन रहन्छ; तर यी मध्ये सबैभन्दा ठूलो प्रेम हो। ” 1 कोरिन्थी 13
सबैले आफैंलाई आधुनिक संसारको जस्तो पुरातनताको ठूलो प्रश्न सोधेका छन: उत्तम बेमम - सर्वोच्च कुन हो ? तपाईं भन्दा पहिले जीवन छ। एकचोटि मात्र तपाई यो बाँच्न सक्नुहुन्छ। ईश्वरको उत्कृष्ट वस्तु के हो, लालच गर्न सर्वोच्च उपहार?
हामीलाई भनिएको छ कि धार्मिक संसारमा सबैभन्दा ठूलो चीज भनेको विश्वास हो। शताब्दीयौंको लोकप्रिय धर्मको लागि यो महान शब्द मुख्य कुरा हो; र हामीले सजिलैसँग यसलाई विश्वमा ग्रे टेस्ट चीजको रूपमा हेर्न सिक्यौं । ठिक छ, हामी गलत छौं। यदि हामीलाई भनिएको छ भने, हामी मार्क मिस गर्न सक्छौं। मैले भर्खरै पढेको अध्यायमा मैले यसका स्रोतमा इसाईमतमा लिएँ। र त्यहाँ हामीले देख्यौं, "यी मध्ये सब भन्दा महान प्रेम हो।" यो ओभरस्टाइन होईन । केही समय अघि मात्र पावलले विश्वासको कुरा गरिरहेका थिए। उनी भन्छन्, "यदि मसँग पूर्ण विश्वास छ भने म पहाडहरू हटाउन सकुँ, र प्रेम नै छैन भने म केही होइन।" अहिलेसम्म बिर्सनु भन्दा पनि उसले जानाजानी तिनीहरूबीच तुलना गर्दछ, "अब विश्वास, आशा, प्रेमको पक्षमा छ " र बिना कुनै हिचकिचाहटको निर्णय पतन हुन्छ, "यी मध्ये सबैभन्दा ठूलो प्रेम हो।"
र यो पूर्वाग्रह होइन। एक मानिस अरूलाई आफ्नो आफ्नै मजबूत पोइन्ट सिफारिस गर्न योग्य छ। प्रेम पावलको कडा मुद्दा थिएन। अवलोकन गर्ने विद्यार्थीले पावलको उमेर ढल्कँदै जाँदा उसको सुन्दर कोमल कोमलता पत्ता लगाउन सक्दछ र उसको चरित्रमा सबै पाकेको छ। तर हातले लेख्दछ, "यिनीहरू मध्ये सब भन्दा ठूलो प्रेम हो", जब हामी यसलाई पहिलो भेट्छौं रगतले दाग छ। न त कोरिन्थीहरूलाई यस पत्रले प्रेमको सारलाई बोनमको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। इसाईमतका मास्टर पापीहरू यसका बारे सहमत छन्। पत्रुस भन्छन्, "सबै भन्दा माथि आपसमा आपसमा प्रेम छ ।" सबै कुरा माथि । र यूहन्ना अझै टाढा जान्छ, "परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ।" र तपाईंलाई पावल कतै कडा शब्दमा भन्ने गहन टिप्पणी याद छ, "प्रेमले व्यवस्थालाई पूरा गर्दछ।" के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभयो कि उसले त्यसो भन्न खोजेको हो? ती दिनहरूमा मानिसहरू दश आज्ञा पालन गरेर स्वर्गमा उनीहरूको यात्रा गर्न काम गरिरहेका थिए, र उनीहरूले निर्माण गरेका एक सय दश आज्ञालाई पालन गर्दै। ख्रीष्टले भन्नुभयो , म तिमीलाई अझ साधारण तरिका देखाउनेछु । यदि तपाइँ एक कुरा गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ यी सय दश दश चीजहरू गर्नुहुनेछ, तिनीहरूको बारेमा कहिल्यै सोचबिचार नगरी। यदि तपाइँ प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाई अनजानमै सम्पूर्ण कानून पूरा गर्नुहुनेछ। र तपाई सजिलैसँग तपाईका लागि हेर्न सक्नुहुन्छ कि त्यो कसरी हुनुपर्दछ। कुनै पनि कमेन्ट र अफमेन्ट लिनुहोस् । "तपाईं अघि कुनै अन्य देवताहरूको छ गर्यौ मलाई ।" यदि एक व्यक्तिले भगवानलाई प्रेम गर्दछ भने, तपाईंले उसलाई त्यो भन्नु आवश्यक पर्दैन। प्रेम भनेको कानूनको पूर्ति हो। "उहाँको नाम व्यर्थमा लिनुहोस्।" के उसले कहिल्यै आफ्नो नाम व्यर्थमा लिने सपना देख्छ होला यदि ऊ उसलाई माया गर्छ भने? "सा पवित्र दिनलाई याद राख्नुहोस् यसलाई पवित्र राख्न।" के उनी सात दिनको एक दिन पाएर अत्यन्तै आफ्नो स्नेहको लागि समर्पण गर्न पाउँदा खुसी हुँदैनन् र? प्रेमले परमेश्वरबारे यी सबै कानूनहरू पूरा गर्ने थियो। र, यदि उसले मान्छेलाई माया गर्थ्यो भने, तपाईंले उसलाई कहिले हाम्रा बुबा र आमाको मान गर्न भन्नु हुने थिएन । ऊ अरू केहि गर्न सकेन। उसलाई मार्नु हुँदैन भन्‍नु यो विवेकपूर्ण हुनेछ। तपाईले उसलाई अपमान मात्र गर्नु हुन्छ यदि तपाईले सुझाव दिनुहुन्छ कि उसले चोर्नु हुँदैन - ऊ आफूले माया गर्ने मानिसबाट कसरी चोर्न सक्छ? छिमेकीको विरुद्ध झूटा साक्षी नबनाऊन् भनेर बिन्ती गर्नु अनावश्यक हुनेछ । यदि उसले उसलाई माया गर्‍यो भने यो उसले गर्ने अन्तिम चीज हुन्छ। तिमीले उसको छिमेकीहरूको लालच नगर्न उसलाई आग्रह गर्ने सपना पनि सोचेनौ। उहाँ बरु तिनीहरू आफैले भन्दा यो स्वामित्व मा थियो। यस तरिकामा " व्यवस्था भनेको कानूनको पूर्ण प्रेम हो ।" यो सबै नियमहरू पूरा गर्ने नियम हो, पुरानो आज्ञाहरू पालन गर्नका लागि नयाँ आज्ञा, ख्रीष्टको इसाई जीवनको एक रहस्य।
अब पावलले यो कुरा बुझेका थिए; र यस महान भव्यतामा उसले हामीलाई सबैभन्दा उत्कृष्ट र मौलिक खाता समेट बोनम प्रदान गरेको छ । हामी यसलाई तीन भागमा विभाजन गर्न सक्छौं। छोटो अध्यायको सुरूमा, हामीसँग प्रेम भिन्न छ ; यसको हृदयमा, हामीले प्रेमको विश्लेषण गरेका छौं ; अन्त्य तिर, हामी प्रेम सर्वोच्च उपहार को रूप मा रक्षा गरेको छ ।
ती दिनहरूमा मानिसहरूले सोचेको अन्य चीजहरूसँग पावलले प्रेमको भिन्नता गरेर सुरू गर्दछन्। म ती चीजहरूमा विस्तृत रूपमा जान खोज्दिन। तिनीहरूको हीनता स्पष्ट छ।
उनले यसलाई प्रस्टसित कुरा गरे। र यो केहि महान उपहार हो, मानिसहरुको प्राण र इच्छामा खेल्ने र उनीहरूलाई उच्च उद्देश्य र पवित्र कार्यहरूमा डोर्याउने शक्ति । पावल भन्छन्, "यदि म मानिसहरू र स्वर्गदूतहरूका विभिन्न भाषाहरूमा बोल्छु र यदि म प्रेम गर्दिन भने म ध्वनि गर्ने काँसा वा झिम्के झ्याम झैं हुँ।" र हामी सबैलाई किन थाहा छ। हामी सबैले भावना बिना शब्दावलीको बहादुरी महसुस गरेका छौं , घोरपन, अकाट्य वालोफनाको पछाडि जसको पछाडि कुनै प्रेम छैन।
उनले यसलाई भविष्यवाणीसंग तुलना गरे। उसले यसलाई रहस्यहरूसँग तुलना गर्छ। उसले यसलाई विश्वाससंग तुलना गरेको छ। उसले यसको सीएआरटीसँग तुलना गर्दछ । प्रेम विश्वास भन्दा किन ठूलो छ? किनभने अन्त साधन भन्दा ठूलो छ। र किन यो दान भन्दा ठूलो छ? किनकि पूरै भाग भन्दा ठूलो छ। प्रेम विश्वास भन्दा ठूलो छ, किनभने अन्त साधन भन्दा ठूलो छ। विश्वासको प्रयोग के हो ? यो आत्मालाई परमेश्वरसँग जोड्नु हो। र मानिसलाई परमेश्वरसँग जोड्ने उद्देश्य के हो? कि ऊ परमेश्वर जस्तो हुन सक्छ। तर भगवान प्रेम हुनुहुन्छ। यसैले विश्वास, साधन, प्रेम गर्न अन्तमा छ, अन्त हो। त्यसकारण प्रेम, विश्वास भन्दा ठूलो छ। यो फेरि दान भन्दा ग्रेटर छ , किनकि पूरै अंश भन्दा ठूलो छ। परोपकार प्रेम को एक सानो बिट मात्र हो, प्रेम को असंख्य मार्ग एक, र त्यहाँ पनि हुन सक्छ, र प्रेम बिना प्रेम को एक ठूलो सौदा हो। सडकमा माग्नेलाई एसी टस गर्न यो एक धेरै सजिलो चीज हो ; यो गर्नु भन्दा यो सजिलो हुन्छ। यद्यपि प्रेम बस रोक्ने मा अक्सर छ। हामी ताम्रको मूल्यमा दु: खको ताराबाट देखिएको सहानुभूतिपूर्ण भावनाहरूबाट राहत खरीद गर्दछौं। यो ज्यादै सस्तो छ - हाम्रो लागि ओ सस्तो, र भिखारीका लागि प्रायः प्रिय पनि। यदि हामीले उहाँलाई साँच्चिकै माया गर्‍यौं भने या त हामी उहाँसँग अझ बढी गर्ने थियौं, वा थोरै।
त्यसोभए पावलले यसलाई बलिदान र शहीदसँग तुलना गरे। र म यो मिसनरीहरूको सानो समूहलाई माग्दछु - र म तपाईंलाई सम्मान गर्दछु कि तपाईंहरू लाई पहिलो पटक यस नामले बोलाउने हो - यो सम्झनको लागि कि तपाईं आफ्नो शरीर जलाउन दिनुहुन्छ, तर प्रेम गर्नुहुन्न, यसले केही फाइदा गर्दैन। - केहि छैन! तपाईंले आफ्नो चरित्रमा ईश्वरीय प्रेमको प्रभाव र प्रतिबिम्ब बाहेक अन्यजातिहरूको लागि ठूलो कुरा लिन सक्नुहुन्न । त्यो विश्वव्यापी भाषा हो। यो तपाइँलाई चिनियाँ वा भारतको बोलीभाषामा बोल्न धेरै बर्ष लाग्नेछ। जबदेखि तपाईं अवश्य जानुहुन्छ, प्रेमको भाषा, सबैले बुझ्नेछन्, यसको बेहोशी वाणीलाई पोखाउने छ। यो मिसनरी हो जो मानिस हो, यो उहाँको शब्द छैन। उसको चरित्र उसको सन्देश हो। अफ्रिकाको मुटुमा, ठूला तालहरूका बीचमा मैले कालो मानिसहरू र महिलाहरू भेट्टाएको छु जसले उनीहरूलाई पहिले कहिल्यै देखेको एक मात्र सेतो मानिस याद गरे - डेभिड लिभिंगस्टोन; र जब तपाईं त्यो अन्धकार महाद्वीपमा उनको फटोस्टपहरू पार गर्नुहुन्छ , पुरुषहरूको अनुहार उज्यालो हुन्छ जब उनीहरू त्यहाँ दयालु डाक्टरको कुरा गर्छन् जुन त्यहाँ वर्षौं अघि बित्यो। तर तिनीहरूले उहाँलाई बुझेनन्; तर उनीहरूले आफ्नो हृदयमा हराएको प्रेम महसुस गरे। तपाइँको श्रमको नयाँ क्षेत्रमा लिनुहोस्, जहाँ तपाइँ तपाइँको जीवन, त्यो सरल आकर्षण, र तपाइँको जीवन कार्य सफल पार्नु पनि पर्छ। तपाई बढि केहि लिन सक्नुहुन्न, तपाईले कम लिनु पनि आवश्यक छ। जाँदा यो मूल्यवान छैन जब तपाईं केहि कम लिनुभयो भने। तपाईं हरेक उपलब्धि लिन सक्नुहुन्छ; तपाईं हरेक बलिदान को लागी ब्रेसेड हुन सक्छ; ख तपाईं आफ्नो शरीर जलेको गर्न दिन भने, र प्रेम छ, यो तपाईं र ख्रीष्टको कारण स्वार्थपूर्ति हुनेछ केही ।
यी चीजहरूसँगको प्रेमको भिन्नता पछि, पावलले तीन पदहरूमा धेरै छोटकरीमा हामीलाई यो सर्वोच्च कुरा के हो भन्नेमा अचम्मलाग्दो विश्लेषण दिन्छ । म तपाइँलाई यो हेर्न सोध्छु। यो एक यौगिक कुरा हो, उसले हामीलाई भन्छ। यो प्रकाश जस्तै छ। तपाईले देख्नु भएको छ कि विज्ञानको मान्छेले प्रकाशको किरण निकालेको छ र यसलाई क्रिस्टल प्रिज्मको माध्यमबाट पार गर्यो, किनकि तपाईले प्रिज्मको अर्कोपट्टि बाहिर आउनु भएको देख्नुभयो जुन यसको सी घटक रातो र नीलो र पहेलोमा टुक्रियो। , र बैजनी, र सुन्तला, र इन्द्रेणीको सबै र हरू - त्यसैले पावलले यस कुरालाई प्रेम गर्दछ, प्रेम, आफ्नो प्रेरित बौद्धिक को शानदार प्रिज्मको माध्यमबाट, र यो अर्को पक्षमा बाहिर आउँछ यसको तत्व मा बिच्छेद । र यी केहि शब्दहरूमा हामीसँग प्रेमको स्पेक्ट्रम, प्रेमको विश्लेषण भन्ने कुरा हुन सक्छ। तपाईं यसको तत्वहरू के अवलोकन गर्नुहुनेछ? तपाईंले याद गर्नुहुनेछ कि तिनीहरूको साझा नामहरू छन्; ती सद्गुणहरू छन् जुन हामी दिनको बारेमा सुन्छौं। ती चीजहरू हुन् जुन जीवनका हरेक ठाउँमा अभ्यास गर्न सकिन्छ; र कसरी, साना चीजहरू र साधारण सद्गुणहरूको एक समूहले , सर्वोच्च कुरा, समम बोनम बनेको छ? प्रेमको स्पेक्ट्रममा नौ अवयवहरू छन्...
धैर्य: "प्रेम लामो समयसम्म सहन्छ।" दया: "र दयालु छ।" उदारता: "प्रेम ईर्ष्या गर्दैन।"
नम्रता: "प्रेम आफैमा होइन, घमण्डले फुल्दैन।"
सौजन्य: "आफैमा अनाकलनीय व्यवहार गर्दैन।"
निःस्वार्थ: "उसको आफ्नै खोजी गर्दैन।" राम्रो स्वभाव: "सजिलै उत्तेजित हुँदैन।" निर्दोषता: "थिन्केट एच नो क्रुम ।"
निष्कपटता: "अधर्ममा रमाउँदैन, तर सत्यमा रमाउँछ।"
धैर्य दया, उदारता; नम्रता शिष्टाचार निःस्वार्थ भाव; राम्रो रिस निर्दोषता ईमानदारी - यी सर्वोच्च उपहार, पूर्ण मानिस को कडा बनाउन। तपाईले बिरामी रूपमा हेर्नुहोस् कि सबै मानिससँग सम्बन्धित छ, जीवनको सम्बन्धमा, ज्ञात आज र नजिकको भोलिको सम्बन्धमा, र अज्ञात अनन्तसम्मको होइन। हामी परमेश्वरलाई धेरै माया गर्छौं। ख्रीष्टले मानिसहरूलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। हामी को साथ ठूलो सम्झौता गर्छौं ; ख्रीष्टले पृथ्वीमा धेरै शान्ति बनाउनुभयो। धर्म कुनै अनौठो वा थपिएको चीज होइन, तर सांसारिक जीवनको प्रेरणा हो, यस संसारिक संसारमा अनन्त आत्माको सास। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, सर्वोच्च कुरा त केही पनि होइन, तर बहुस्ख्यक शब्दहरू र कार्यहरूलाई थप समाप्ति दिने जसले हरेक सामान्य दिनको योग बनाउँछ।
यी प्रत्येक सामग्रीमा पारित नोट बनाउनु भन्दा बढि समय गर्ने समय छैन। प्रेम धैर्य हो । यो प्रेमको सामान्य दृष्टिकोण हो; निष्क्रिय प्रेम, प्रेम सुरु गर्न; हतारमा छैन; शान्त सम्मन आउँदा यसको काम गर्न तयार हुन्छ, तर यसै बीच नम्र र शान्त आत्माको गहना लगाउँछ। प्रेम लामो समयसम्म सताउँछ; सबै कुरा बोक्छ; सबै कुरामा विश्वास गर्छौं; सबै कुराको आशा गर्दछ। प्रेम को लागी बुझ्दछ, र त्यहाँ ईफर्स्ट प्रतीक्षा गर्दछ।
दया। प्रेम सक्रिय छ। के तपाईंले कहिल्यै याद गर्नुभएको छ कि ख्रीष्टको जीवनको कति मात्र दयालु कार्यहरू गर्नमा खर्च भयो - केवल केवल दयालु कार्यहरू गरेर? यसलाई हेराईमा यसमाथि दगुर्नुहोस्, र तपाईंले पाउनुहुनेछ कि उहाँ आफ्नो समयको एक ठूलो अनुपात केवल मकिन जीमा मात्र बिताउनुहुन्छ , मान्छेलाई राम्रो मोडमा। संसारमा सुख भन्दा ठूलो एउटा मात्र चीज छ, र त्यो हो पवित्रता; र यो हाम्रो पालनमा छैन । तर परमेश्वरले छ हाम्रो शक्ति राख्नु हाम्रो बारे ती * को आनन्द छ, र त्यो हदसम्म गर्न छ हाम्रो तिनीहरूलाई दयालु भएर सुरक्षित छ।
कोही भन्छन्, "सबैभन्दा ठूलो कुरा, एक व्यक्तिले स्वर्गमा बस्नुहुने बुबाको लागि गर्नसक्ने कुरा अरू केटाकेटीप्रति दयालु हुनु हो।" मलाई आश्चर्य लाग्छ कि किन हामी हामी भन्दा दयालु छैनौं ? संसारलाई कति चाहिन्छ । यो कति सजीलो गरीन्छ। कसरी तत्काल यो एक सीटीएस। यो कसरी याद राखिन्छ। यो कती अति प्रचुर मात्रामा फिर्ता फिर्ता भुक्तान गर्दछ - किनकि संसारमा कुनै णी छैन यति आदरणीय, यती उत्कृष्ट सम्मान, प्रेमको रूपमा। "प्रेम कहिल्यै टल्दैन।" प्रेम सफलता हो, प्रेम खुशी हो, प्रेम जीवन हो। "प्रेम, म भन्छु," ब्राउनिंगसँग, "जीवनको उर्जा हो।"
जीवनको लागि, ती सबैको साथ खुशी वा शोक पैदा हुन्छ
र आशा र डर,
के हाम्रो अवसर ओ ' सिक्ने पुरस्कार हो
प्रेम कती हुन सक्छ, साँच्चै भएको छ, र छ।
जहाँ प्रेम छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। मानिस जो प्रेममा रहन्छ उ परमेश्वरमा बस्छ। भगवान प्रेम हुनुहुन्छ। त्यसैले प्रेम। भेदभाव बिना, गणना बिना, ढिलाइ बिना, प्रेम। यसलाई गरिबहरूमाथि राख्नुहोस्, जहाँ यो धेरै सजीलो छ; विशेष गरी धनीहरूलाई, जसलाई प्राय: जसो सबैभन्दा बढी चाहिन्छ ; सबै भन्दा धेरै हाम्रो बराबरीहरूमा, जहाँ यो धेरै गाह्रो छ, र जसको लागि सायद हामी प्रत्येक कम्तिमा गर्छौं। खुशी पार्न खोज्नु र रमाईलो गर्नुबीच भिन्नता छ । खुशी दिनुहोस्। खुशी दिने कुनै मौका गुमाउनुहोस्। किनभने त्यो साँच्चिकै मायालु भावनाको अन्तहीन र बेनामी विजय हो। “म यस संसारबाट तर एक पटक जानेछु। कुनै पनि राम्रो कुरा जुन म गर्न सक्छु, वा कुनै दयालु छ जुन म कुनै पनि मानिसलाई देखाउन सक्छु, मलाई अब यो गरौं। मलाई यो स्थगित गर्न वा बेवास्ता नगर्नुहोस्, किनकि म फेरि यस ठाउँमा जानुहुन्न।”
उदारता । "प्रेम ईर्ष्या गर्नुहुन्न।" यो अरूसँगको प्रतिस्पर्धामा प्रेम हो। जब तपाईं एक राम्रो काम को लागी प्रयास गर्नुहुन्छ तपाईले अरु मानिसहरुलाई उस्तै प्रकारको काम गरिरहेको पाउनुहुनेछ , र हुनसक्छ यसलाई अझ राम्रो गरीरहेको छ। उनीहरुलाई ईर्ष्या नगर। ईर्ष्या को एक भावना हो टी गर्न बिरामी-इच्छा नली जस्तै लाइन भएका आफैलाई , एक आत्मा लालच र। कति कम इसाई कार्यहरू पनि गैर-क्रिश्चियन भावनाहरूको बिरूद्ध संरक्षण हो । ती सबै अयोग्य मुडहरू मध्ये सबैभन्दा घृणित हो जुन एक इसाईको आत्माले निश्चित रूपले बाध्यता राख्दछ कि हामी वा प्रत्येक कामको ढोकामा पर्खन्छौं , यदि हामी यो महानताको अनुग्रहबाट सुदृढ भएनौं। केवल एक चीजको लागि इसाई ईर्ष्याको आवश्यकता छ, ठूलो, धनी र उदार आत्मा जसले "ईर्ष्या गर्नुहुन्न"।
र त्यसपछि, त्यो सबै सिकिसके पछि, तपाईंले यो अर्को कुरा सिक्नुपर्दछ , नम्रता - तपाईंको ओठमा छाप लगाउँन र तपाईंले के गर्नुभयो बिर्सनुभयो। तपाईं दयालु हुनु भएपछि, प्रेम दुनिया मा चोरी भएको छ र यसको सुन्दर काम गरे पछि, फेरि छायामा फिर्ता जानुहोस् र यस बारे केही भन्न। प्रेम खाल पनि देखि नै । प्रेमले आत्म-सन्तुष्टि पनि छोड्छ। "प्रेम आफैमा भरपर्दैन, घमण्डले फुल्दैन।"
यस सम्मेलन बोनममा फेला पार्न पाँचौं घटक थोरै अनौंठो हो : सौजन्य । यो समाजमा प्रेम हो, शिष्टाचारको सम्बन्धमा प्रेम हो। "प्रेम आफैंमा बेवास्ता हुँदैन ।" शिष्टता मा प्रेमको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। सौजन्यलाई साना चीजहरूमा प्रेम भनिन्छ। र शिष्टताको एक रहस्य प्रेम हो। प्रेम आफैंले अनियन्त्रित व्यवहार गर्न सक्दैन । तपाई अत्यधिक असुरक्षित व्यक्तिहरूलाई सब भन्दा माथि सम्म राख्न सक्नुहुन्छ , र यदि उनीहरूको हृदयमा प्रेम भण्डार छ भने, तिनीहरूले आफैलाई अनादरकारी व्यवहार गर्ने छैनन्। तिनीहरू केवल यो गर्न सक्दैनन्। कार्लाइलले रोबर्ट बर्न्सको बारेमा भने कि युरोपमा प्लुटम्यानपीट भन्दा अरु कुनै सज्जन पुरुष थिएन। किनभने उनी एथ्री एनजी - माउस, डेजी, र सबै थोरै, ठूला र साना चीजहरू बनाउँदछन् जुन परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो। त्यसैले यो साधारण राहदानीको साथ ऊ कुनै पनि समाजसँग मिसाउन सक्थ्यो, र ऐयरको किनारमा रहेको सानो कुटीजबाट अदालतहरू र दरबारहरूमा प्रवेश गर्न सक्थ्यो। तपाईंलाई "भद्र मानिस" शब्दको अर्थ थाहा छ । यसको मतलब कोमल मानिस हो, मायालु हुँदै मायालु काम गर्ने मानिस। र यो सम्पूर्ण कला र यसको रहस्य हो। कोमल मानिस कुराहरुको प्रकृतिमा गर्न सक्तैनन्, अनइन्जेन्टल चीज हुन्छन्। अनजान आत्मा, विसंगत, असंक्रमित प्रकृतिले अरु केहि गर्न सक्दैन। "प्रेमले आफूलाई अनावश्यक व्यवहार गर्दैन।"
निःस्वार्थ । "प्रेम आफ्नै खोजी गर्दैन।" पालन: छैन पनि भन्ने छ आफ्नै उनको । बेलायतमा अ ्ग्रेजी आफ्नो अधिकारमा समर्पित छ र “ठीकै” छ । तर त्यस्तो समय आउँछ जब एक व्यक्तिले आफ्नो हक त्याग्ने उच्च अधिकारको अभ्यास गर्न सक्दछ । यद्यपि पावलले हामीलाई हाम्रो हक त्याग्न बोलाएनन्। प्रेम धेरै गहिरो प्रहार। यसले हामीलाई तिनीहरूलाई कुनै पनि खोजी नगर्ने, तिनीहरूलाई बेवास्ता गर्ने, व्यक्तिगत तत्व पूर्ण रूपमा हाम्रो क्याल्कू लेसनमेन्टबाट हटाउने गर्दैन। हाम्रा अधिकारहरू त्याग्न गाह्रो छैन । तिनीहरू प्राय: बाह्य हुन्छन्। गाह्रो कुरा आफैलाई छोड्नु हो । अझ गाह्रो कुरा अझै चीजहरूको लागि आफैंलाई खोज्नु होइन । हामीले तिनीहरूलाई खोजिसकेपछि, तिनीहरूलाई खरीद गर्‍यौं , तिनीहरूलाई जित्यौं , उनीहरू योग्य भयौं , हामीले क्रीमलाई आफैंका लागि हटाइसकेका छौं। सानो क्रस त्यसपछि तिनीहरूलाई छोडिदिन। तर उनीहरूलाई खोज्न होइन, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नै कुराको लागि मात्र हेर्दछ, तर अरूको चीजहरूमा पनि हेर्नुहोस् । "तिमी ठूलो? आफैलाई लागि कुराहरू" भन्यो ; अगमवक्ता " तिनीहरूलाई छैन खोज्न ।" किन? किनभने त्यहाँ छ कुरामा कुनै महानता । कुराहरू ठूलो हुन सक्दैन। मात्र महानता हो लगभग गल्ती छ निःस्वार्थ प्रेम। नै समेत आत्म-इन्कार केही छ। केवल एक महान उद्देश्य वा प्रेमले बर्बाद सफाइ गर्न सक्नुहुन्छ। यो यो अझ गाह्रो छ, मैले भनेको छु कि आफ्नै खोज्नु होइन, त्यसलाई खोज्नु भन्दा, मैले त्यो फिर्ता लिनु पर्छ। यो आंशिक स्वार्थी हृदयको मात्र हो। प्रेमलाई कुनै कठिनाई छैन, र केही कठिन छ। म ख्रीष्टको भनेर विश्वास जुवा ईएएस छ वाई। ख्रीष्टको "जुवा" जीवन लिएर को बस उहाँको तरिका हो। अनि म यो विश्वास अन्य कुनै पनि भन्दा एक सजिलो तरिका हो। म यसलाई अन्य कुनै पनि भन्दा सुखी तरिका हो विश्वास गर्छन्। द ख्रीष्टको शिक्षा सबैभन्दा स्पष्ट पाठ त्यहाँ कुनै आनन्द छ कि छ भइरहेको र केहि प्राप्त, दिने टी। म बारम्बार , कुनै आनन्द छ भइरहेको वा, तर केवल मा रही मा । अनि आधा संसार मा छ गलत गंध खुशीको खोजीमा। उनीहरू सोच्छन् कि यो लिनु र पाउनु समावेश हो , र अरुले सेवा गरेकोमा। यो जीमा समावेश गर्दछ , र अरूको सेवामा । उहाँ जो महान हुनु हुन्छ, उहाँ भन्नुहुन्छ, ख्रीष्टले सेवा गर्नु पर्छ। त्यो खुशी हो कि , उसले याद गर्नु पर्छ कि त्यहाँ एउटा मात्र मार्ग छ - यो अधिक आशिष्‌ हो, यो भन्दा बढी खुशी छ, प्राप्त गर्नु भन्दा दिनु हो।
अर्को घटक एक धेरै केबल एक हो: राम्रो टेम्पर। "प्रेम सजिलै उत्तेजित हुँदैन।" यस फेला पार्नको लागि यस भन्दा बढि अरू कुनै कुरा छैन। हामी खराब हानिलाई एक धेरै हानिरहित कमजोरीको रूपमा हेर्न इच्छुक छौं। हामी यसको बारेमा प्रकृतिको एक अशक्तता, एक परिवार असफलता, टी शाहीकरणको कुरा हो , कुनै व्यक्तिको चरित्र अनुमान गर्न गम्भीर गम्भीरतामा लिने कुरा होइन। र अझै यहाँ, प्रेमको यो विश्लेषणको मुटुमा, यसले ठाउँ फेला पार्दछ; र बाइबल बारम्बार यसलाई मानव स्वभावको सबैभन्दा विनाशकारी एलेमेन्ट्स को रूपमा निन्दा गर्न फिर्ता आउँदछ ।
बिरामी स्वभावको विचित्रता यो छ कि यो सद्गुणको उपाध्यक्ष हो। यो अन्यथा महान चरित्रमा प्रायः एउटा धब्बा हुन्छ। तपाईं पुरुषहरू सबै जो पूर्ण रूपमा परिपक्व हुनुहुन्छ, र महिलाहरू जो पूर्ण रूपमा पूर्ण हुन्छन् भनेर चिन्नुहुन्छ, तर कुनै सजीलो, झुकाव, छिटो-स्वभाव, वा “टच” स्वभावका लागि। उच्च नैतिक चरित्रको साथ बिरामी स्वभावको यो अनुकूलता नैतिकताको अनौंठो र सबैभन्दा दुखद् समस्या हो। सत्य यो हो कि त्यहाँ पापका दुई ठूला वर्गहरू छन् - शरीरका पापहरू, र स्वभावका पापहरू । उडन्ता छोरा पहिलो प्रकारको रूपमा लिन सकिन्छ, दोस्रोको भाइ भाई। यी मध्ये कुनचाहिँ खराब हो भनेर अब समाजमा कुनै श .्का छैन। यसको ब्रान्ड गिरिन्छ, चुनौती बिना, प्रोडिगलमा। तर के हामी सही छौं? हामीसँग एक अर्काको पापको तौल गर्न सन्तुलन छैन , र मोटा र उत्तम मानिस मात्र शब्दहरू छन्; तर उच्च प्रकृतिमा भएका गल्तीहरू तल्लोपट्टिभन्दा कम गम्भीर हुन सक्छ र प्रेम गर्नेको आँखामा, प्रेमको विरुद्ध पाप एक सय गुणा बढी आधार देखिन्छ । दुराचारीको कुनै रूप छैन, विश्व लोभको होइन, सुनको लोभ होइन, मतवालीपनले होइन, समाजलाई दुष्ट रीस भन्दा बढि गर्छ। जीवनलाई अभद्र बनाउने, समुदायहरूलाई तोड्ने, अत्यन्त पवित्र सम्बन्धहरू नष्ट गर्ने, विध्वंसक घरहरू, पुरुष र महिलाहरूलाई ओझेलमा पार्ने , संक्षेपमा भन्ने हो भने, पूर्ण रूपमा अनावश्यक दु: ख पैदा गर्ने शक्तिको लागि यो प्रभाव एक्लै रहेको छ। एल्डर भाइलाई हेर, नैतिक, मेहनती, बिरामी, कर्तव्यनिष्ठ - उसले आफ्नो सद्गुणहरूको सबै श्रेय प्राप्त गरोस् - यस मान्छेलाई हेर, यो बच्चा, आफ्नै बुबाको ढोका बाहिर लुटेर। हामी पढ्छौं, "ऊ रिसाएको थियो, र भित्र पस्दैनथ्यो।" पाहुनाहरूको आनन्दमा बुबा, नोकरहरू, मा पार्ने प्रभावलाई हेर्नुहोस्। उडन्तामा पार्ने प्रभावको न्यायाधीश - र कति कल्पित मानिस परमेश्वरको राज्यको भित्रबाट भित्र आउँछन् भन्ने अभक्त चरित्रले राख्छ? टेम्परको अध्ययनको रूपमा विश्लेषण गर्नुहोस्,
को गर्जन-बादल नै यो दाजु गरेको ब्रो मा बटोरता रूपमा। यो के बनेको छ? ईर्ष्या, क्रोध, घमण्ड, अस्पष्टता, क्रूरता, आत्म-कठोर, स्पर्श, कुकुरापन, - यी यी अँध्यारो र प्रेमरहित आत्मा को तत्व हो। फरक अनुपातमा, पनि, यी सबै बिरामी स्वभावका तत्वहरू हुन्। यदि स्वभावको त्यस्ता पापहरू बाँच्न खराब छैन भने र शरीरका पापहरू भन्दा यसका साथ बस्नको लागि न्याय गर्नुहोस् । के ख्रीष्टले वास्तवमै आफैंले यस प्रश्नको जवाफ दिनुभएन, "म तिमीलाई भन्दछु कि कर उठाउनेहरू र वेश्याहरू स्वर्गको राज्यमा पस्छन् ।" स्वर्गमा वास्तवमै यस्तो ठाउँको लागि कुनै ठाउँ छैन । यस्तो मुड भएको एक व्यक्तिले स्वर्गमा दयनीय बनाउँदछ यसका सबै व्यक्तिहरूका लागि। त्यसकारण, त्यस्ता मानिस नयाँ गरी जन्मिन्छन् भने ऊ स्वर्गको राज्यमा पस्न सक्दैन । किनकि यो पूर्ण रूपले निश्चित छ - र तपाईं मलाई गलतफहमी गर्नुहुन्न - स्वर्गमा पस्नको लागि एकजना मान्छेले आफूसँगै लैजानुपर्छ।
तब तपाईले देख्नुहुनेछ किनकि टेम्पर किन महत्वपूर्ण छ। यो एक्लो के होईन, तर यसले के प्रकट गर्दछ। यसैले म स्वतन्त्रता लिन्छु अब त्यस्तो अनौठो स्पष्टसँग यसको कुरा गर्दा।
यो प्रेमको लागि एक परीक्षण हो, एक लक्षण, तल एक मायालु प्रकृतिको प्रकटीकरण। यो एक बीचमा ज्वरो हो जुन अन्त्यहीन रोग भित्र ; कहिले काँही बबल सतहमा उम्कने जो तल केही सडेपन विश्वासघात गर्दछ; सबै भन्दा धेरै लुकाइएको उत्पादनको नमूना एफ आत्माको स्वेच्छाले खस्दा कुनैको गार्ड बन्द गर्दा; एक शब्दमा, सयौं घृणित र गैर-इसाई पापहरूको चट्या .्गको रूप। धैर्यताको लागि, दयाको चाहनाको, उदारताको चाहनाको, भद्रताको चाहनाको, निःस्वार्थताको चाहनाको लागि; सबै इन्स्ट्यान्ट सजिलैसँग टेम्परको एक फ्ल्यासमा प्रतीकात्मक छन् ।
यसैले स्वभावसँग डिल गर्न पर्याप्त छैन। हामीले स्रोतमा जानुपर्दछ र भित्री प्रकृति परिवर्तन गर्नुपर्नेछ, र क्रोधित ह्युमहरू आफैंले मर्नेछन्। आत्मालाई मीठो बनाउँदछ एसिड तरल पदार्थ बाहिर निकालेर होइन, तर केहि भित्र राखेर - महान् प्रेम, नयाँ आत्मा, ख्रीष्टको आत्मा। ख्रीष्ट, ख्रीष्टको आत्मा, हाम्रो बीचमा प्रयोग, मीठो, शुद्ध, सबै परिवर्तन । यसले केवल के गलत मेटाउन सक्छ, केमिकल परिवर्तनको काम गर्न सक्छ, नविकरण र पुनर्जन्म गर्न सक्छ, भित्री मानिसलाई पुनर्स्थापित गर्दछ। इच्छाशक्तिले मानिसलाई परिवर्तन गर्दैन। समयले पुरुष परिवर्तन गर्दैन। ख्रीष्टले गर्नुहुन्छ। त्यसकारण, त्यो दिमाग तिमीमा रहोस् जुन ख्रीष्ट येशूमा थियो। हामी मध्ये केही संग गुमाउन धेरै समय छैन। याद राख्नुहोस्, यो फेरि वा मृत्युको कुरा हो । म, आफैलाई लागि जोडतोडले बोल्ने लागि मद्दत गर्न सक्छ आफूलाई । "जो मलाई विश्वास यी साना, एक अपमान गर्नेछन्, यो थिए राम्रो उहाँलाई लागि आफ्नो घाँटी बारेमा फाँसी दिइयो, र उहाँले समुद्रको गहिराई मा डुबेर मर्छन् थिए ।" भन्नुपर्दा, यो प्रभु येशूको जानाजानी फैसला हो कि प्रेम नगर्नु भन्दा बाँच्नु उत्तम हो। माया नगरी बाँच्नु राम्रो हो।
मूर्खता र ईमानदारी एक शब्द संग लगभग खारेज हुन सक्छ। निर्दोषता सुस पुस मानिसका लागि अनुग्रह हो । र यसको स्वामित्व व्यक्तिगत प्रभावको ठूलो रहस्य हो। तपाईंले पाउनुहुनेछ , यदि तपाईंले एकछिनको लागि सोच्नुभयो भने, तपाईंलाई प्रभाव पार्ने मानिसहरू तपाईंमा विश्वास गर्नेहरू हुन्। श ्काको वातावरणमा मानिसहरू छिटो उठ्छन्; तर त्यो मा पहिले तिनीहरू विस्तार, र प्रोत्साहन र शिक्षा फैलोशिप फेला पार्नुहोस्। यो अचम्मको कुरा हो कि यस कडा र असह्य संसारमा यहाँ र त्यहाँ केही दुर्लभ आत्माहरू बाँकी रहनुपर्दछ जसले कुनै खराब कुरा सोच्दैनन्। यो महान अस्वस्थता हो। प्रेमले "कुनै खराबीलाई सोच्दैन ," कुनै उद्देश्यलाई दोष दिदैन, उज्ज्वल पक्ष देख्दछ, हरेक कार्यमा उत्तम निर्माण गर्दछ। बस्नको लागि कस्तो मजाको मनको अवस्था! एक दिनको लागि यसको साथ पनि भेट्न कत्ति प्रोत्साहन र उन्मुखीकरण! विश्वास गर्नु भनेको बचत गर्नु हो। र यदि हामी ई- लाई प्रभावकारी बनाउन वा अरूलाई माथि उठाउने प्रयास गर्छौं भने , हामी चाँडै देख्नेछौं कि सफलता उनीहरूमाथिको हाम्रो विश्वासको अनुपातमा छ। अर्कोको सम्मानको लागि एउटा मान्छेले गुमाएको आत्म-सम्मानको पहिलो पुनर्स्थापना हो; ऊ के हो भन्ने हाम्रो आदर्श उसको लागि ऊ के हुन सक्छ भन्नेको आशा र नमुना बन्छ।
"प्रेम अधर्ममा खुशी हुँदैन, तर सत्यमा रमाउँछ।" मैले यस ईमानदारीलाई आधिकारिक संस्करणमा अनुवादित शब्दहरूबाट बोलाएको छु "" सत्यमा रमाउँछ। " र, निश्चित रूपमा, के यो वास्तविक अनुवाद थियो, केहि ई अधिक मात्र हुन सक्छ । जसले प्रेम गर्छ उसले सत्यलाई मानिस भन्दा कम प्रेम गर्छ। ऊ सत्यमा रमाउनेछ - उसलाई विश्वास गर्न सिकाइएको कुरामा खुशी नहोऊ; यस चर्चको शिक्षामा वा त्यसमा होइन; यस वा त्यो मा छैन; तर " सत्यमा ।" * उसले वास्तविकलाई मात्र स्वीकार्छ ; उसले तथ्यहरुमा जानको लागि प्रयास गर्नेछ; उसले नम्र र पक्षपातपूर्ण मनले सत्यको खोजी गर्नेछ र कुनै पनि त्यागमा जे भेट्छ त्यसले त्यसको कदर गर्दछ। तर संशोधित संस्करणको अधिक शाब्दिक अनुवादले सत्यको लागि मात्र त्यस्तो बलिदान चाहान्छ। पावलले वास्तवमा भन्नुको तात्पर्य यो छ, जहाँ हामी पढ्छौं, "के म अधर्मलाई खुशी हुँदिन , तर सत्यसंगै रमाउँछ," यो गुण जसको सम्भाव्यता कोही पनि अ ्ग्रेजी शब्द होईन - र ईमानदारी * छैन - यसले पर्याप्त परिभाषित गर्‍यो, यसमा सायद अझ कडाई पनि समावेश छ। , आत्मसंयम जसले अरूको दोषबाट पूंजी बनाउन इन्कार गर्दछ; परोपकार जसले अरूको कमजोरीलाई उजागर गर्नमा खुशी हुँदैन, तर "सबै कुरालाई समेट्छ"। उद्देश्यको ईमानदारी जुन चीजहरू उनीहरूको रूपमा हेर्ने प्रयास गर्दछन्, र शंकाको डर वा निन्दा भन्दा राम्रो भेट्टाउँछन्।
यति धेरै प्रेमको नालिसिसको लागि । अब हाम्रो जीवनको व्यवसाय भनेको यी चीजहरू हाम्रो चरित्रमा फिट हुनु हो। त्यो सर्वोच्च कार्य हो जुन हामीले यस संसारमा आफूलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ, प्रेम सिक्न। के जीवन प्रेम सिक्नको लागि अवसरहरूको पूर्ण छैन? प्रत्येक पुरुष एन डी महिला हरेक दिन को एक हजार है। संसार खेल मैदान होईन; यो एक स्कूल कोठा हो। जीवन छुट्टी होइन, तर एक शिक्षा हो। र हामी सबैको लागि एक अनन्त पाठ भनेको हामी कसरी प्रेम गर्न सक्दछौं । एक राम्रो क्रिकेटर के बनाउँछ? अभ्यास गर्नुहोस्। के एक मान्छे एक राम्रो कलाकार, एक राम्रो मूर्तिकार, एक राम्रो संगीतकार बनाउँछ? अभ्यास गर्नुहोस्। कुन कुराले मानिसलाई असल भाषाविद्, राम्रो स्टेनोग्राफर बनाउँछ? अभ्यास गर्नुहोस्। कुन कुराले मानिसलाई असल मान्छे बनाउँछ? अभ्यास गर्नुहोस्। अरु केही छैन। धर्मको बारेमा केहि कपट छैन। हामी आत्मालाई विभिन्न तरीकाले, बिभिन्न कानूनहरू अन्तर्गत, शरीर र दिमाग प्राप्त गर्नेहरूबाट प्राप्त गर्दैनौं। यदि एउटा व्यक्तिले आफ्नो पाखुरा व्यायाम गर्दैन भने ऊ बाइसेप्स मांसपेशी विकास गर्दैन; र यदि एक व्यक्तिले आफ्नो आत्मा प्रयोग गर्दैन भने उसले आफ्नो आत्मामा कुनै मांसपेशि हासिल गर्दैन, चरित्रको शक्ति हुँदैन , नैतिक फाइबरको शक्ति हुँदैन , न आध्यात्मिक विकासको सौन्दर्य। प्रेम उत्साही भावना को चीज छैन। यो समग्र इसाई चरित्रको एक धनी, कडा, पुरुषार्थी, जोडदार अभिव्यक्ति हो - यसको पूर्ण विकासमा क्रिष्टले जस्तै प्रकृति। र यो महान चरित्रका घटकहरू निरन्तर अभ्यास द्वारा निर्माण गर्न सकिन्छ। ख्रीष्टले सिकर्मीको पसलमा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? अभ्यास गर्दै। सिद्ध भए पनि, हामी पढ्छौं कि उसले आज्ञाकारिता सिके , र ज्ञानमा र परमेश्वरमा अनुमोदन पायो । हाम्रो जीवनमा को साथ धेरै झगडा नगर्नुहोस् । यसको कहिल्यै नत्याग्ने ख्याल, यसको प्यारा वातावरण, तपाइँले खडा गर्न सक्ने वेक्सनहरू, तपाइँको साथ बस्न को लागी सानो र कठोर आत्माको गुनासो नगर्नुहोस्। सबै भन्दा माथि, प्रलोभनको रिस नगर्नुहोस्; अलमल्लमा नहुनुहोस् किनकि यसले तपाईंलाई झन् झन् धेरै मात्रामा घेर्दछ, र न त प्रयासको लागि, न त कष्टका लागि र प्रार्थनाको लागि रोकिन्छ। त्यो तपाईंको अभ्यास हो। यही अभ्यास जुन तपाईंलाई परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको हो; र यसले तपाइँलाई धीरजी, र नम्र, र उदार, र निःस्वार्थ, र दयालु, एक सभ्य बनाउने मा यसको काम भइरहेको छ। हातले पछाडि नराख्नुहोस् जुन तपाईंभित्र अझै पनि आकारहीन छविलाई मोल्ड गर्दै छ। यो अझ सुन्दर हुँदै गइरहेको छ, यद्यपि तपाईंले यसलाई देख्नुभएन, र प्रलोभनको प्रत्येक स्पर्शले यसको पूर्णतामा थप्न सक्छ। त्यसैले जीवनको बीचमा राख्नुहोस्। आफूलाई अलग नबनाउनुहोस् । पुरुषहरू बीच, र चीजहरूको बीचमा, र समस्याहरू, र कठिनाइहरू, र बाधाहरूको बीचमा बन्नुहोस्। तपाइँ गोएटेका शब्दहरू Es bildet ein Talent sich in der Stille, Doch ein Character in dem Strom der Welt सम्झनुहुन्छ: चरित्र “प्रतिभा एकान्त मा आफैलाई विकास हुन्छ; चरित्र म जीवनको धारा । प्रतिभा एकान्तमा विकसित हुन्छ - प्रार्थना को प्रतिभा, विश्वास को, ध्यान को, अदृष्य को प्रतिभा को; चरित्र संसारको जीवनको धारामा बढ्छ। त्यो मुख्यतया पुरुषहरू प्रेम सिक्नु हो।
कसरी? अब, कसरी? यसलाई ईजी आर बनाउनका लागि मैले प्रेमका केही तत्वहरूको नाम दिएँ। तर यी केवल तत्वहरू हुन्। प्रेम आफै परिभाषित गर्न सकिदैन। प्रकाश यसको सामग्रीहरूको जोड भन्दा बढि केहि हो - एक चम्किरहेको, चकाउने, डरलाग्दो ईथर। र प्रेम यसका सबै तत्वहरू भन्दा बढि चीज हो - एक धमकी, डरलाग्दो, संवेदनशील, जीवित चीज। सबै र हरूको संश्लेषण द्वारा, पुरुषहरू सेतो बनाउन सक्छन्, तिनीहरूले प्रकाश बनाउन सक्दैनन्। सबै सद्गुणको संश्लेषण गरेर, पुरुषहरू सद्गुण बनाउन सक्छन्, तिनीहरूले प्रेम गर्न सक्दैनन्। त्यसोभए हामी कसरी यो अद्भुत पूरा हाम्रो प्राणहरु मा भनिएको छ? यसलाई सुरक्षित गर्न हामीले हाम्रो इच्छाहरूलाई ब्रेस गर्दछौं। हामी जोसँग छ त्यसलाई प्रतिलिपि गर्न कोसिस गर्छौं। हामी यस बारे नियम राख्छौं। हामी हेर्छौँ। हामी प्रार्थना गर्दछौं। तर यी चीजहरूले मात्र हाम्रो प्रकृतिमा प्रेम ल्याउँदैनन्। प्रेम एक प्रभाव हो । र मात्र हामीले शर्त पूरा गर्दा हामी उत्पादनमा असर गर्न सक्दछौं। के म तपाईंलाई कारण बताउन सक्छु ?
यदि तपाईं यूहन्नाको पहिलो पत्रिको संशोधित संस्करणमा फर्किनुभयो भने तपाईंले यी शब्दहरू पाउनुहुनेछ: “हामी प्रेम गर्दछौं किनकि उहाँले पहिले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो।” “हामी प्रेम गर्छौं,” तर “हामी उहाँलाई प्रेम गर्दैनौं ”। त्यो पुरानो संस्करणसँग यो वाई हो, र यो एकदम गलत छ। "हामी प्रेम गर्दछौं - किनभने उसले हामीलाई पहिला माया गर्थ्यो।" त्यो शब्दमा हेर्नुहोस् "किनभने।" मैले बोलेको कारण यो हो । " किनभने उसले पहिले हामीलाई प्रेम गर्‍यो," त्यसको परिणामले हामी प्रेम गर्दछौं, हामी उहाँलाई प्रेम गर्दछौं , हामी सबै मानिसहरूलाई प्रेम गर्दछौं । हामी यसलाई सहयोग गर्न सक्दैनौं । किनभने उहाँ हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, हामी प्रेम गर्दछौं, हामी सबैलाई प्रेम गर्दछौं। हाम्रो मुटु बिस्तारै परिवर्तन भएको छ। ख्रीष्टको प्रेम मनन, र तपाईं प्रेम गर्नेछौं। त्यो ऐनासामु खडा हुनुहोस्, ख्रीष्टको चरित्र झल्काउनुहोस् र कोमलताबाट तपाईं समान छविमा परिवर्तन हुनुहुनेछ । अरु कुनै उपाय छैन। तपाईलाई अर्डर गर्न मनपर्दैन। तपाईं केवल मनमोहक वस्तु हेर्न सक्नुहुन्छ, र यसमा प्रेममा पस्न सक्नुहुन्छ, र यसको प्रतिरूपमा बढ्न सक्नुहुन्छ। र यस परिपूर्ण चरित्रलाई हेर्नुहोस्, यो उत्तम जीवन। महान् त्यागलाई हेर्नुहोस् जब उसले आफूलाई जीवनमा, सारा जीवनमा र कलवरी क्रसमा राख्दछ। र तपाईंले उहाँलाई प्रेम गर्नै पर्छ। र उहाँलाई माया गरेर, तपाईं उहाँ जस्तै हुनु पर्छ। प्रेम प्रेम । यो प्रेरणाको प्रक्रिया हो। विद्युतीकृत शरीरको उपस्थितिमा फलामको एउटा टुक्रा राख्नुहोस्, र त्यस आईरको टुक्रालाई केही समयको लागि विद्युतीकरण गरिनेछ। यो स्थायी चुम्बकको मात्र उपस्थितिमा अस्थायी चुम्बकमा परिवर्तन गरिएको छ, र जब सम्म तपाईं दुई सँगसँगै छोड्नुहुन्छ, तिनीहरू दुबै मैग्नेट हुन्। हामीलाई साथ दिनुहुने उहाँसँगसँगै बस्नुहोस् , र हामीलाई हाम्रो लागि आफैलाई दिनुभयो , र तपाईं पनि एक स्थायी चुम्बक, स्थायी रूपमा आकर्षक बल बन्नुहुनेछ; अनि उहाँ जस्तै तपाईं सबै मानिस आकर्षित हुनेछ, तपाईं उहाँ जस्तै सबै मानिसहरु को आकर्षित हुनेछ। त्यो प्रेमको अपरिहार्य प्रभाव हो। कुनै पनि व्यक्ति जसले त्यो कारण पूरा गर्छ कि त्यो ई एफ ई टी उसकोमा उत्पादन भएको हुनुपर्दछ । धर्म संयोगले, वा रहस्य द्वारा, वा द्वारा आउँछ भन्ने विचार छोड्ने प्रयास गर्नुहोस्। यो प्राकृतिक कानून वा अलौकिक कानून द्वारा आउँछ, किनकि सबै व्यवस्था ईश्वरीय हो। एडवर्ड इरभि एक पटक मर्दै गरेको केटालाई भेट्न गए, र जब उनी त्यो कोठामा पसे उसले पीडितको टाउकोमा आफ्नो हात राख्यो र भन्यो, "हे मेरो छोरो, भगवानले तपाईंलाई माया गर्नुहुन्छ," र गयो। अनि केटाले आफ्नो ओछ्यानबाट शुरू गरे र घरका मानिसहरूलाई भने, “परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ! भगवान् मलाई माया गर्नुहुन्छ! " यो केटो परिवर्तन भयो। भगवान्‌ले उसलाई अत्यधिक प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने भावनाले उसलाई पग्लियो र उहाँमा नयाँ हृदयको निर्माण गर्न थाल्यो। र यसरी नै परमेश्वरको प्रेमले मानिसमा अतुलनीय हृदय पग्लन्छ र उहाँमा नयाँ सृष्टि गर्दछ, जो धीरजी, नम्र, कोमल र निस्वार्थ रहन्छ। र यसलाई प्राप्त गर्न त्यहाँ कुनै अर्को तरीका छैन । यसको बारेमा कुनै रहस्य छैन। हामी अरूलाई प्रेम गर्दछौं, हामी सबैलाई प्रेम गर्दछौं, हामी आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर्दछौं, किनकि उहाँले पहिले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो।
अब मसँग एक बन्द वाक्य छ वा दुई उच्चतम अधिकारी को रूपमा प्रेम बाहिर गायन को कारणको बारेमा जोड्न । यो एक धेरै उल्लेखनीय कारण हो। एक शब्दमा यो यो हो: यो रहन्छ । “प्रेम,” भन्छ, “कहिल्यै असफल हुँदैन।” त्यसपछि उसले फेरि दिनको महान चीजहरूको आफ्नो अद्भुत सूचीको सुरू गर्दछ, र ती सबैलाई एक एक गरेर प्रकट गर्दछ। ऊ ती चीजहरूमाथि दगुर्छ जुन मान्छेहरू आखिरीमा जान्छन्, र देखाउँछन् कि तिनीहरू सबै क्षणिक, अस्थायी, बितिसकेका छन्।
"या त्यहाँ हुन तिनीहरू असफल पर्छ भविष्यवाणीहरू।" उहाँ एक भविष्यवक्ता हुनु पर्छ भनेर त्यस दिन उनको केटाको लागि आमाको महत्वाकांक्षा थियो। सयौं वर्षसम्म कुनै पनि भविष्यवक्ताद्वारा परमेश्वरले बोल्नुभएको थिएन, र त्यसबेला अगमवक्ता राजाभन्दा महान् थिए। पुरुषहरू अर्को सन्देशवाहकको लागि आश .्का साथ कुर्दै थिए, र उनको ओठमा झुण्ड्यो जब उहाँ परमेश्वरको स्वर मा देखा पर्नुभयो। पल, "या त्यहाँ भन्छन् हुन भविष्यवाणीहरू, तिनीहरूले असफल गर्नेछु।" यो पुस्तक भविष्यवाणीहरु को पूर्ण छ। एक एक गरेर तिनीहरू "असफल" भए; त्यो हो, काम पूरा गरिसकेपछि समाप्त हुन्छ; तिनीहरूसँग अब विश्वमा केहि गर्न बाँकी छैन एक श्रद्धालु व्यक्तिको विश्वासको खाका बाहेक।
तब पावल अन्य भाषाहरूको बारेमा बोल्दछन्। त्यो अर्को कुरा थियो जुन एकदमै लोभ भयो। "त्यहाँ या हुन अन्य भाषामा, ती बन्द हुनेछन्।" जसरी हामी सबैलाई थाहा छ, धेरै, धेरै शताब्दीहरू बितिसक्यो जुन यस संसारमा अन्य भाषाहरूमा चिनिएको छ। तिनीहरू बन्द छन्। तपाइँलाई कुनै पनि अर्थमा लिनुहोस्। यसलाई लिनुहोस्, उदाहरणका लागि, केवल सामान्य भाषाको रूपमा - एक अर्थ जुन पावलको दिमागमा थिएन, र यसले हामीलाई खास पाठ दिन सक्दैन भने पनि सामान्य सत्यलाई औंल्याउँछ। यी अध्यायहरूमा लेखिएका शब्दहरू विचार गर्नुहोस् - ग्रीक। यो गयो। ला टिन लिनुहोस् - ती दिनहरूको अन्य ठूलो जिब्रो। यो धेरै पहिले रोकियो। भारतीय भाषामा हेर्नुहोस्। यो बन्द छ। स्कटल्याण्ड हाईल्याण्ड्स, आयरल्याण्डको वेल्सको भाषा, हाम्रो आँखाको अगाडि मर्दैछ। बाइबललाई बाहेक अहिलेको अंग्रेजी भाषामा अ ्ग्रेजी भाषामा सबैभन्दा लोकप्रिय किताब डिकनको एउटा कृति हो, उसका पिकविक पेपर्स । यो मुख्य रूपमा लन्डन सडक जीवनको भाषामा लेखिएको छ; र विज्ञहरूले हामीलाई आश्वासन दिन्छ कि पचास बर्षमा यो औसत अ ्ग्रेजी पाठकको लागि अस्पष्ट हुनेछ।
तब पावल अझ टाढा जान्छ र अझ ठूलो हिम्मतका साथ डी भन्छन् , "यदि ज्ञान छ भने, यो हराउँछ।" प्राचीनहरूका ज्ञानहरू कहाँ छन्? यो पूर्ण रूपमा गयो। एक स्कूलको बच्चा आज सर आइज्याक न्यूटनलाई चिन्ने भन्दा धेरै जान्दछन्। उसको ज्ञान हराइसकेको छ। तपाईंले हिजोको अखबार आगोमा हाल्नुभयो। यसको ज्ञान हराइसकेको छ। तपाईं केही पेन्सको लागि महान ज्ञानकोशको पुरानो संस्करण खरीद गर्नुहुन्छ। तिनीहरूको ज्ञान हराइसकेको छ। कोचलाई स्टीमको प्रयोगबाट कसरी हटाईन्छ हेर्नुहोस्। हेर्नुहोस् कि बिजुलीले कसरी सुपरिडेस गर्‍यो, र सयौं नयाँ आविष्कारहरूलाई विस्मरणमा बदले। एक जना महान जीवित अधिकारी, सर विलियम थम्पसनले अर्को दिन भने, "स्टीमेंजाइन बितिसकेको छ।" "या त्यहाँ हुन ज्ञान, यो अचानक हराउनु पर्छ टाढा।" प्रत्येक कार्यशालामा तपाईले देख्नुहुनेछ, पछाडिको आँगनमा, पुरानो फलामको थुप्रो, केही पा ,्ग्राहरू, केही लिभरहरू, केहि क्र्या कहरू, र टुटेका र खियासँग खाइएका छन्। बीस बर्ष पहिले त्यो शहरको गौरव थियो। महान आविष्कार हेर्न देशबाट मानिसहरू ओइरिए; अब यो अधिग्रहण गरिएको छ, यसको दिन सकियो। र यस दिनको सबै अहंकारी विज्ञान र दर्शन चाँडै नै पुरानो हुनेछ। तर हिजो, एडिनबर्ग विश्वविद्यालयमा, संकायको सबैभन्दा ठूलो व्यक्तित्व सर जेम्स सिम्पसन थिए, क्लोरोफार्मका अन्वेषक। भोलिपल्ट उनका उत्तराधिकारी र भतिजा प्रोफेसर सिम्पसनलाई विश्वविद्यालयका पुस्तकालयले पुस्तकालयमा गएर आफ्नो विषयवस्तुको किताब लिन भन्यो जुन आवश्यक छैन। र लाइब्रेरियनलाई उनको जवाफ यो थियो: "दसौं वर्ष भन्दा पुरानो प्रत्येक पाठ्यपुस्तक लिनुहोस्, र यसलाई तल कक्षमा राख्नुहोस्।" केही वर्ष अघि सर जेम्स सिम्पसन एक महान अधिकार थिए: मानिसहरु पृथ्वीका विभिन्न ठाउँबाट आएका मानिसहरु उनीसंग सल्लाह लिन आएका थिए। र त्यस समयको लगभग पूरै शिक्षालाई आजको विज्ञानले बेवास्ता गर्न लगायो। र साइन्सको हरेक शाखामा यो समान छ। “अब हामी केही हदसम्म जान्दछौं। हामी अन्धकारमा गिलासबाट देख्छौं। ”
के तपाई मलाई केहि पनि बताउन सक्नुहुन्छ जुन अन्तिम हुनेछ? पावलले धेरै कुराको नाम लिन अस्वीकार गरे। उनले पैसा, भाग्य, ख्याति उल्लेख गरेनन्; तर उसले आफ्नो टिम्माका ठूला चीजहरू लिए , जुन उत्तम पुरुषहरूले सोचेका थिए उनीहरूमा केही छ, र तिनीहरूलाई एकदमै अलग गरेर ब्रश गर्नुभयो। पावलले यी कुराहरू विरुद्ध कुनै शुल्क थियो आफूलाई । उहाँ उनीहरूको बारेमा मात्र भन्नुहुन्थ्यो कि उनीहरू चल्दैनन्। ती महान चीजहरू थिए, तर सर्वोच्च चीजहरू होइनन्। त्यहाँ पछाडि चीजहरू थिए। के हामी विगतमा हामी के गर्छौं, बाहिर के हामी सम्पत्ति बाहिर। मानिसहरू पाप भनेर दोष लगाउने थुप्रै चीजहरू पाप होइनन्; तर ती अस्थायी हुन्। र यो नयाँ नियमको मनपर्दो तर्क हो। जोन यस संसारको बारेमा भन्छन् कि यो गलत हो भनेर होइन , तर केवल यो "बितेर जान्छ"। संसारमा एक ठूलो सम्झौता छ कि रमाईलो र सुन्दर छ; त्यहाँ एक ठूलो सम्झौता हो कि महान र आकर्षक छ; तर यो चल्दैन। आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा , र जीवनको गर्व, थोरै समयका लागि। यसैले संसारलाई प्रेम नगर। यसमा समावेश भएको कुनै पनि कुराको लागि अमर आत्माको जीवन र समर्पण लायक छैन । अमर आत्माले आफूलाई आफूलाई अमर जस्तो चीजमा दिनु पर्छ। र एकमात्र अमर चीजहरू यी हुन्: "अब विश्वास, आशा, प्रेम रहन्छ, तर यी मध्ये सबैभन्दा ठूलो प्रेम हो।"
कसै-कसैलाई लाग्छ त्यस्तो समय आउन सक्छ जब यी तीन मध्ये दुई चीजले विश्वासलाई दृष्टिमा लिन्छ, आशाको फल हो। पावलले त्यसो भनेन। हामीलाई थाहा छ अब आउनेवाला जीवनको अवस्थाको बारेमा थोरै । तर के पक्का छ यो प्रेम रहनु पर्छ। परमेश्वर, अनन्त परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। तसर्थ त्यो अनन्त उपहारको चाहना, एउटा कुरा जुन यो निश्चित छ त्यो खडा हुनेछ, जुन एउटा ब्रह्माण्डमा वर्तमानमा रहनेछ जब विश्वका सबै राष्ट्रहरूका अन्य सबै सिक्का बेकार र अनियन्त्रित हुनेछन्। तिमीहरू दिनेछु गर्न , धेरै कुराहरू पहिलो प्रेम गर्न आफूलाई दिनुहोस्। चीजहरूलाई उनीहरूको अनुपातमा समात्नुहोस्। चीजहरूलाई उनीहरूको अनुपातमा समात्नुहोस्। गर्छन् कम्तीमा हाम्रो जीवनमा पहिलो ठूलो वस्तु हुन वर्ण यी शब्दहरू, वर्ण मा बचाव हासिल गर्न - र यो राउन्ड प्रेम निर्माण गरिएको छ जो ख्रीष्टको चरित्र छ।
मैले भने यो कुरा अनन्त छ। के तपाईंले कहिल्यै याद गर्नुभयो कि यूहन्नाले प्रेम र विश्वासलाई अनन्त जीवनमा कसरी निरन्तर जोड्छन्? म सानो छँदा मलाई भनिएको थिएन कि "परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्दछ उसले अनन्त जीवन पाओस्।" मलाई के भनिएको थियो, मलाई याद छ, यो थियो कि परमेश्वरले संसारलाई यति माया गर्नुभयो कि यदि म उहाँमा भरोसा राख्छु भने, मैले शान्तिको कुरा गर्नुपर्दछ, वा मैले आराम गर्नुपर्दछ, वा म खुशी हुने थिएँ, वा म थिएँ। सुरक्षा छ तर मैले आफैंमा यो पत्ता लगाउनुपर्दछ कि जसले उहाँमा भरोसा गर्दछ - त्यो हो, जसले उहाँलाई प्रेम गर्दछ, भरोसा केवल प्रेमको अवसर हो - अनन्त जीवन छ । सुसमाचारको पुस्तकले मानिसलाई जीवन दिन्छ। कहिले पनि पुरुषहरुलाई एक थम्बल इस्पेलल प्रस्ताव नगर्नुहोस्। तिनीहरूलाई केवल आनन्द, वा केवल शान्ति, वा केवल आराम, वा केवल सुरक्षा प्रदान नगर्नुहोस् ; उनीहरूलाई भन्नुहोस् कि कसरी ख्रीष्टले मानिसहरुलाई उनीहरूको भन्दा बढी सम्पन्न जीवन दिन आउनुभयो, प्रेमले भरिपूर्ण जीवन, र यसकारण आफैले मुक्ति पाउन प्रशस्त, र संसारको उन्मूलन र छुटकाराको लागि ठूलो उद्यम। त्यसोभए मात्र सुसमाचारले सम्पूर्ण मानिस, शरीर, आत्मा र आत्मालाई समात्छ र आफ्नो प्रकृतिको प्रत्येक भागलाई यसको अभ्यास र इनाम दिन सक्छ। हालका धेरैजसो सुसमाचारका पुस्तकहरू केवल मानव स्वभावको भागलाई मात्र सम्बोधन गरिएको छ। तिनीहरू शान्तिको प्रस्ताव राख्छन्, जीवन होइन। विश्वास, प्रेम होइन; औचित्य क्याटेसन , पुनर्जनन होइन। र पुरुषहरू त्यस्ता धर्मबाट फेरि चिप्लन्छन् किनकि यसले उनीहरूलाई कहिल्यै पक्रेन। तिनीहरूको प्रकृति यसमा सबै थिएन। यो भन्दा पहिलेको जीवन भन्दा कुनै गहिरो र खुशी जीवनको प्रस्ताव। निस्सन्देह यो तर्कको लागि खडा हुन्छ कि ओ पूर्ण प्रेम संसारको प्रेम संग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्।
प्रशस्त गरी माया गर्नु प्रशस्त गरी बाच्नु हो, र सँधै माया गर्नु भनेको सँधै बाँच्नु हो। तसर्थ, अनन्त जीवन प्रेम संग बाध्य छ। हामी सधैंको लागि यही कारणले हामी बाँच्न चाहन्छौं जुन हामी भोली बाँच्न चाहन्छौं । तपाईं किन भोली बस्न चाहनुहुन्छ? यो किनभने कोही मानिस छ जसले तपाईलाई प्रेम गर्छ, र जसलाई तपाई भोली देख्न चाहानुहुन्छ, र संग हुनुहोस्, र प्रेम गर्नुहोस्। हामीले बाँच्नको कारण बाहेक अरू कुनै कारण छैन जुन हामी माया गर्छौं र माया गर्छौं। यो एक मा एन कुनै उहाँलाई प्रेम गर्न को लागी छ जब उसले आत्महत्या गर्छ। जब सम्म उसको साथीहरू हुन्छन्, उसलाई प्रेम गर्ने र जसलाई उसले प्रेम गर्छ, ऊ बाँच्नेछ। किनभने बाँच्नु भनेको प्रेम गर्नु हो। यो कुकुरको प्रेम हुनुहोस्, यसले उसलाई जीवनमा रक्षा गर्नेछ; तर त्यो जान दिनुहोस् र उसको कुनै सम्पर्क छैन, बाँच्न को कुनै कारण छैन। ऊ आफ्नै हातले मर्छ। अनन्त जीवन पनि परमेश्वरलाई चिन्नु हो, र परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। यो ख्रीष्टको आफ्नै परिभाषा हो। यसलाई चिन्तन गर्नुहोस्। "यो अनन्त जीवन हो, ताकि तिनीहरूले तपाईं, एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई, र तपाईंले पठाउनुभएको येशू ख्रीष्टलाई चिन्न सकून्।" प्रेम अनन्त हुनुपर्दछ। यो भगवान के हो। अन्तिम विश्लेषणमा, तब, प्रेम जीवन हो। प्रेम कहिले पनि असफल हुँदैन, र जीवन कहिल्यै विफल हुँदैन, जबसम्म प्रेम हुन्छ। जुन कुरा हामीलाई पावलले देखाउँदैछ त्यो दर्शन हो। किन चीजहरूको प्रकृतिमा प्रेम सर्वोच्च कुरा हुनुपर्दछ - किनकि यो पछिल्लोमा जाँदैछ; किनकि चीजहरूको प्रकृतिमा यो अनन्त जीवन हो। यो त्यस्तो कुरा हो जुन हामी अहिले बाँचिरहेका छौं, त्यो होइन कि हामी मरेपछि पाउँछौं; हामी बाँचुन्जेल हामी मर्ने मौकाको राम्रो सम्भावना हुँदैन। कुनै भाग्य प्रत्यक्ष भन्दा यो संसारमा मानिस अधीन र पुरानो एक्लै, बढ्न सक्छ र । हराउनु भनेको असीमित अवस्थामा बस्नु हो, प्रेमरहित र माया नपाएको; र मुक्ति पाउन प्रेम गर्नु हो; मानिस जो प्रेममा रहन्छ उ परमेश्वरमा रहेको छ। गो डीको लागि प्रेम हो।
अब मैले सबै सिध्याइसकेको छु। तपाइँ मध्ये कति जना मसँग हप्ताको एक पटक अर्को तीन महीनाको लागि यो अध्याय पढ्नमा सामेल हुनुहुनेछ? एक मान्छेले त्यो एक पटक गर्‍यो र यसले उसको सम्पूर्ण जीवनलाई नै परिवर्तन गर्यो। तपाईं यो गर्नुहुन्छ? यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो चीजको लागि हो। तपाईं हरेक दिन यो पढेर माग्नु हुन सक्छ , विशेष गरी पदहरू जसले उत्तम चरित्र वर्णन गर्दछ। “प्रेम लामो समयसम्म सहन्छ, र दयालु हुन्छ; प्रेम ईर्ष्या नगर। प्रेम आफैमा भरपर्दैन। " तपाईंको जीवनमा यी सामग्रीहरू पाउनुहोस्। त्यसोभए तपाईंले गर्ने सबै कुरा अनन्त हुन्छ। यो गर्न लायक छ । यो समय दिन लायक छ। कुनै मानिस निन्द्रामा सन्त हुन सक्दैन; र सर्त पूरा गर्न आवश्यक मात्रामा प्रार्थना र ध्यान र समयको माग गर्दछ, जस्तो कि कुनै पनि दिशामा सुधार, शारीरिक वा मानसिक, तयारी आवश्यक छ र ग । त्यो एउटा कुराको लागि आफैलाई सम्बोधन गर। कुनै पनि मूल्य मा यो चरित्र तपाइँको लागी आदान प्रदान गरिएको छ। तपाईले आफ्नो जीवनलाई फर्केर हेर्दा पाउनुहुनेछ जुन पलहरू खडा हुन्छन्, ती क्षणहरू जब तपाई साँच्चिकै बाँच्नुभएको हुन्छ, त्यो क्षण हो जब तपाईले प्रेमको भावनामा कामहरू गर्नुभयो। जब मेमोरीले भूतपूर्व स्क्यान गर्दछ, माथिको र जीवनको सबै ट्रान्जिटरी रमाइलो भन्दा माथि, त्यहाँ ती सर्वोच्च घण्टा उफ्रिन्छ जब तपाईं आफ्नो वरिपरि भएकाहरूलाई कुनै ध्यान नदिईकन गर्न सक्षम हुनुभयो, चीजहरू पनि झगडालु हुँदैन , तर जसको तपाईं महसुस गर्नुहुन्छ तपाईंको अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्नुभयो। मैले भगवानले बनाएका लगभग सबै राम्रा चीजहरू देखेको छु। मैले मानिसजातिको लागि योजना गरेको लगभग सबै आनन्दको आनन्द उठाएको छु; र अझै पछाडि फर्केर हेर्दा म चार पाँच छोटो अनुभव भएको जीवनमा माथि उभिरहेको देख्छु, जब परमेश्वरको प्रेमले केही नक्कल, मेरो प्रेमको केही सानो कार्यमा प्रतिबिम्बित गर्दछ, र ती चीजहरू जस्तो देखिन्छ सबैको जीवन एक्लो रहन्छ। हाम्रो जीवनमा सबै कुरा ट्रान्जिटरी हो। सबै अन्य राम्रो दूरदर्शी छ। तर प्रेमका कार्यहरू जसको बारेमा कोही जान्दैनन्, वा कहिले जान्न सक्छन् - ती कहिले असफल हुँदैनन्।
मत्तीको पुस्तकमा, न्यायको दिन हाम्रो लागि सिंहासनमा विराजमान र बाख्रालाई भेडा बाँडिएको व्यक्तिको चित्रणमा चित्रण गरिएको छ , त्यसबेला एउटा मान्छेको परीक्षण होइन, "मैले कसरी विश्वास गरें?" तर "मैले कसरी प्रेम गरें?" धर्मको परिक्षण, धर्मको अन्तिम परीक्षा, धार्मिकता होइन, तर प्रेम हो। म भन्छु कि महान दिनमा धर्मको अन्तिम जाँच धार्मिकता होइन, तर प्रेम हो; मैले के गरेको छु, मैले के विश्वास गरेको छुईन, मैले जे हासिल गरेको छुईन, तर मैले जीवनका सामान्य परोपकारहरू कसरी छोडिदिएँ। त्यो डरलाग्दो अभियोगमा कमिसनको पापलाई पनि संदर्भित गरिएको छैन। हामीले के गरेका छैनौं, भूलको पापले गर्दा हामी न्यायकर्ता हुन्छौं। यो अन्यथा हुन सक्दैन। किनकि प्रेमलाई रोक्नु भनेको ख्रीष्टको आत्मालाई अस्वीकार गर्नु हो, यो प्रमाण हो कि हामीले उहाँलाई कहिल्यै चिनेनौंन, त्यो उहाँ हाम्रो लागि व्यर्थमा जिउनुहुन्छ। यसको अर्थ यो हो कि हाम्रो सबै विचारहरूमा उहाँले केहि सुझाव दिनुभएन , कि हामीले हाम्रो जीवनमा केहि पनि प्रेरणा पाएनन् , कि हामी उहाँलाई त्यति नजिक भएनौं जब उहाँ संसारको लागि उहाँको अनुकम्पाको जादूले समात्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब यो हो कि -
म आफ्नै लागि बाँचें, मैले आफ्नै लागि सोचेँ,
मेरो लागि, र बाहेक कोही पनि छैन -
जसरी येशू कहिल्यै बाँच्नुभएको थिएन,
मानौं उहाँ कहिले पनि चल्नुभएको छैन।
यो मानिसको पुत्र हो जसको अघि संसारका सबै मानिसहरू भेला हुनेछन्। यो मानवता को उपस्थिति मा छ कि हामी चार्ज हुनेछ। र दृश्य आफैंमा, यो दृश्य मात्र, चुपचाप हरेकको न्याय गर्दछ। तिनीहरू त्यहाँ हुनेछन् जसलाई हामीले भेट्यौं र सहयोग गरेका छौं ; वा त्यहाँ, अप्रत्याशित भीड जसलाई हामीले उपेक्षा वा तिरस्कार गरेका छौं। अरु कुनै पनि साक्षीलाई बोलाउन आवश्यक छैन। मायापना बाहेक अरू कुनै शुल्कलाई प्राथमिकता दिइने छैन। धोकामा नपर्नुहोस्। शब्दहरू जुन हामी सबैले एक दिन सुन्न सक्दछौं धर्मको होइन जीवनको आवाज , चर्चहरू र सन्तहरूको होइन तर भोका र गरिबहरूको, धार्मिक र सिद्धान्तको होइन तर आश्रय र लुगाको हो, बाइबल र प्रार्थना पुस्तकहरूको होइन तर ख्रीष्टको नाममा कपको चिसो पानी। धन्यबाद आजको ईसाईमत संसारको आवश्यकता नजिक आउँदैछ । लाई मद्दत गर्न प्रत्यक्ष। ईश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्, केश चौड़ाईबाट, धर्म के हो, परमेश्वर के हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ, जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, त्यहाँ उहाँलाई अझ राम्ररी ज्ञान छ। ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ? भोकालाई खुवाउने, ना ,्गो लुगा लगाउने, बिरामीलाई भेट्न जाने। अनि ख्रीष्ट कहाँ हुनुहुन्छ? कहाँ ?
- जसमा एक सानो बच्चा प्राप्त हुनेछ
मेरो नामले मलाई ग्रहण गर्छ । र को हुन्
ख्रीष्टको? सबैलाई प्रेम छ
छ परमेश्वरको जन्म।